TwisterCoin စျေး - အွန်လိုင်း TWIST ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို TwisterCoin (TWIST)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ TwisterCoin (TWIST) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ TwisterCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ TwisterCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
TwisterCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TwisterCoinTWIST သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0262TwisterCoinTWIST သို့ ယူရိုEUR€0.0222TwisterCoinTWIST သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.02TwisterCoinTWIST သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0239TwisterCoinTWIST သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.236TwisterCoinTWIST သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.165TwisterCoinTWIST သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.584TwisterCoinTWIST သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.098TwisterCoinTWIST သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.035TwisterCoinTWIST သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0366TwisterCoinTWIST သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.586TwisterCoinTWIST သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.203TwisterCoinTWIST သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.142TwisterCoinTWIST သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.96TwisterCoinTWIST သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.42TwisterCoinTWIST သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0359TwisterCoinTWIST သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0396TwisterCoinTWIST သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.817TwisterCoinTWIST သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.182TwisterCoinTWIST သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.77TwisterCoinTWIST သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩31.11TwisterCoinTWIST သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10.12TwisterCoinTWIST သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.93TwisterCoinTWIST သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.725
TwisterCoinTWIST သို့ BitcoinBTC0.000002 TwisterCoinTWIST သို့ EthereumETH0.00007 TwisterCoinTWIST သို့ LitecoinLTC0.000452 TwisterCoinTWIST သို့ DigitalCashDASH0.000268 TwisterCoinTWIST သို့ MoneroXMR0.000281 TwisterCoinTWIST သို့ NxtNXT1.83 TwisterCoinTWIST သို့ Ethereum ClassicETC0.00376 TwisterCoinTWIST သို့ DogecoinDOGE7.71 TwisterCoinTWIST သို့ ZCashZEC0.000275 TwisterCoinTWIST သို့ BitsharesBTS1 TwisterCoinTWIST သို့ DigiByteDGB0.897 TwisterCoinTWIST သို့ RippleXRP0.0887 TwisterCoinTWIST သို့ BitcoinDarkBTCD0.00089 TwisterCoinTWIST သို့ PeerCoinPPC0.0873 TwisterCoinTWIST သို့ CraigsCoinCRAIG11.76 TwisterCoinTWIST သို့ BitstakeXBS1.1 TwisterCoinTWIST သို့ PayCoinXPY0.451 TwisterCoinTWIST သို့ ProsperCoinPRC3.24 TwisterCoinTWIST သို့ YbCoinYBC0.00001 TwisterCoinTWIST သို့ DarkKushDANK8.28 TwisterCoinTWIST သို့ GiveCoinGIVE55.87 TwisterCoinTWIST သို့ KoboCoinKOBO5.8 TwisterCoinTWIST သို့ DarkTokenDT0.0241 TwisterCoinTWIST သို့ CETUS CoinCETI74.5